Imaadka qofka Range Degenaansho - MT4 Muujiyeyaasha
Home MT4 Muujiyeyaasha Imaadka qofka Range Degenaansho
Imaadka qofka Range Degenaansho
tilmaame CDRVolatility waxaa loo isticmaali karaa, isagoo ah hanuuniye u fidinno S / L ka, T / P iyo T / S. Muddo ka furmo suuqa markii la doortay, waayo, helidda saafiga ah positive qiimaha, tilmaamahan bandhigayaa gacansiga ugu weyn (signal is-) iyo downswing ugu weyn (signal kooxa). Waayo isbedelka qiimaha negative shabag, downswing ugu weyn uu noqdo signal is-iyo gacansiga ugu weyn waa signal ka kooxa.
waxqabadka Trading hagaajinaysaa sida is-iyo gooladaha kooxa kala fog. signal The kooxa kala bixisaa xad hoose for Loss Stop ee (in Liiska Forbes). signal is-waxay bixisaa tuse heerka Qaado Faa'iido iyo Degenaansho guud ahaan kala duwan.
user The dooran kartaa size uu furmo suuqa, marinkii (Liiska Forbes) dhaqdhaqaaqa qiimaha (u furan in ay xirto ee guud ahaan suuqa kala) iyo muddada for celcelis ahaan tilmaame ah.
Imaadka qofka Range Degenaansho waa Metatrader a 4 (MT4) tilmaame iyo nuxurka Tilmaame Forex ee waa in aan baddalno xogta taariikhda ururay.
Imaadka qofka Range Degenaansho siinayaa fursad ay ku ogaan dhegyadii kala duwan iyo astaamaha isbedbeddelka sicirka kuwaas oo aan la arki karin in ay isha qaawan.
Sidee si loo soo dajiyo imaadka qofka Range Volatility.mq4?
Download imaadka qofka Range Volatility.mq4
Nuqul isku imaadka qofka Range Volatility.mq4 in Directory Metatrader aad / khubaro / tilmaamayaasha /
Right click on imaadka qofka Range Volatility.mq4
Tusiyaha imaadka qofka Range Volatility.mq4 waxaa laga heli karaa aad Chart
Sidee Xagga Metatrader saar isku imaadka qofka Range Volatility.mq4 4 Chart?
article PreviousMA Triple Madyan
Coppock – tilmaame for MetaTrader 4
Target indicator – tilmaame for MetaTrader 4
3 EMA crossover – tilmaame for MetaTrader 4